Seminar Invitation, Dr. Lee Mun Sang and Dr. Lee Kwang Pil
Seminar Invitation Dear All of Professor, Head of Department, Teachers, Post graduate students and fourth year students from Yezin Agricultural University, You are cordially invited to attend the seminar of Dr. Lee Mun Sang (Kyung Pook National University) and Dr. Lee Kwang Pil (Kyung Pook National University), with the topic “Cultivation of essential mineral reinforced...
Seminar Invitation, Dr. Keiko Natsuaki and Dr. Rie Miyaura
Seminar Invitation Dear All of Professor, Head of Department, Teachers, Post graduate students and fourth year students from Yezin Agricultural University, You are cordially invited to attend the seminar of Dr. Keiko Natsuaki and Dr. Rie Miyaura, with the topic “Linking people for the development of agriculture’‘ and “Agroecological Research of Integrated Farming Systems for...
Seminar Invitation, Dr. Aung Htun Oo (2006 Batch)
Seminar Invitation Dear All of Professor, Head of Department, Teachers, Post graduate students and fourth year students from Yezin Agricultural University, You are cordially invited to attend the seminar of Dr. Aung Htun Oo, with the topic “YPARD – Myanmar for Young Agronomists and Professionals”. When – 4-12-2017 (Monday) Time – (8:30 AM) Where...
27 th Convocation Announcement
Invitation to Bachelor holder for Postgraduate Diploma in Food Science and Technology under Nurti-SEA Project in Yezin Agricultural University
Yezin Agricultural University is accepting submission of interested candidates who want to attend Postgraduate Diploma in Food Science and Technology with the following eligibilities. The applicant must be Myanmar Nationality. If the applicant is government staff, he or she has at least2years’ service and not older than 45 years old. If he or...
ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်သင်တန်းများ ပိတ်ရက်/ဖွင့်ရက် ကြေညာခြင်း
၁။ ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ် ၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ပညာသင်နှစ် (ဒုတိယနှစ်ဝက်) ဘွဲ့ကြို/ဘွဲ့လွန် သင်တန်းအားလုံး၏ ကျောင်းပိတ်ကာလကို ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၂)ရက်နေ့မှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၁၃)ရက်နေ့အထိ သတ်မှတ်လိုက်သည်။ ၂။ ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် (ပထမနှစ်ဝက်) ဘွဲ့ကြို/ဘွဲ့လွန် သင်တန်းအားလုံး၏ ကျောင်းဖွင့်ကာလကို ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၁၄)ရက်၊ အင်္ဂါနေ့တွင် ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာလိုက်သည်။ ၃။ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်၊ စတုတ္ထနှစ်သင်တန်းနှင့် ဘွဲ့လွန်သင်တန်းတို့၏ ကျောင်းလခနှင့် အခကြေးငွေများကို ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ(၁၄)ရက်၊ အင်္ဂါနေ့မှ နိုဝင်ဘာလ(၁၇)ရက် သောကြာနေ့ထိ ပေးသွင်းရန် သတ်မှတ်ပြီး နိုဝင်ဘာလ (၂၀)ရက်နေ့မှစ၍ သင်တန်းများ စတင်သင်ကြားမည် ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာလိုက်သည်။ မှတ်ချက်။ ။ နောက်ဆုံးနှစ်...
Seminar Invitation, Ma Thazin Hmwe
Seminar Invitation Dear All of Professor, Head of Department, Teachers, Post graduate students and fourth year students from Yezin Agricultural University, You are cordially invited to attend the seminar of Ma Thazin Hmwe, AGC- 87, with the topic “Evaluation of the Sustainability in Land Use and Soil Management Practices on Selected Soils by Using Some Physico-Chemical Properties”....
Seminar Invitation, Maung Maung and Ma Hsu Min Swe
Seminar Invitation Dear All of Professor, Head of Department, Teachers, Post graduate students and fourth year students from Yezin Agricultural University, You are cordially invited to attend the seminar of Maung Maung (HSC– 71) and Ma Hsu Min Swe (M.Phil.HORTI-2), with the topic “Effects of Different Explants, Plant Growth Regulators and Shoot Density on in vitro regeneration...
၁။ စိုက်ပျိူးရေးတက္ကသိုလ် ဘွဲ့ရများအသင်းမှ ကြီးမှူးကျင်းပသော (၁၁) ကြိမ်မြောက် သုတေသနစာတမ်းဖတ်ပွဲကို Bridging the Technology and People ခေါင်းစဉ်ဖြင့် အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ စာတမ်းဖတ်ပွဲအား ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ပညာရှင်များနှင့် ပုဂ္ဂလိက ပညာရှင်များ ပါဝင်တက်ရောက် ဆွေးနွေးနိုင်ပါရန် ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။ ၂။ တင်သွင်းဖတ်ကြားမည့် စာတမ်းများကို အင်္ဂလိပ်လို အကျဉ်း/ အကျယ် (Time News Roman , font 12, Line Spacing 1.5, Page 12-15) ဖြင့် (Hard Copy, Soft Copy) များကို စာတမ်းရှင် အမည်နှင့် ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာ အပြည့်အစုံ ဖော်ပြပေးပြီး ၃၀.၁၁.၂၀၁၇...